admin – Visit Nepal
May 24, 2019 by admin Posted in अन्य
१० जेठ, काठमाडौं । यो ८ जेठका दिनको सगरमाथाको तस्विर हो । यो पटक सगरमाथामा ट्राफिक जाम छ ।यो दिन आरोहीहरु सगरमाथाको शिखरमा पुग्न मात्र होइन, फर्किने बेला समेत घन्टौं जाममा परेका थिए ।यसअघि ३ जेठ, २०७३ मा एकै दिन सर्वाधिक २ सय ५ आरोही चुचुरोमा पुगेको कीर्तिमान छ ।
May 24, 2019 by admin Posted in Uncategorized
काठमाडौं । भूकम्पपछि बन्द रहेको नेपाल–चीन जोड्ने तातोपानी नाका आउँदो साताभित्रै पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हाउ याङ्छीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलोपटक बिहीबार दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो जानकारी दिएकी हुन् ।
उनले भनिन्, “सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पबाट त्यहाँका भौतिक संरचनामा नराम्रो क्षति भएको थियो ती संरचना अझै पूर्ण रुपमा पुनःनिर्माण गर्न सकिएको छैन । त्यसैले त्यहाँ मानव आवतजावतका लागि अझै खतरा छ । ”
उनले सो क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको पुनःनिर्माणमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै नेपालका तर्फबाट पनि पूर्वाधारको सुधारमा प्रयास हुनुपर्ने बताइन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
May 23, 2019 by admin Posted in विश्व
काठमाडौं। भारतमा नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्रि हुने पक्का भएको छ । लोकसभा चुनावको जारी मतगणनामा भाजपाको गठबन्धन ३४३ सिटमा अगाडि छ भने लोकसभामा बहुमत ल्याउन २ सय ७२ सिट आवश्यक पर्छ । सन् २०१४ को निर्वाचनमा भाजपा एक्लैले २ सय ८२ सिटमा जित हासिल गरेको थियो । यस पटक त्यस भन्दा पनि बढी सिटमा अग्रता लिएको छ । भाजपाका कार्यकर्ताले जीत सुनिश्चित भएपछि देशभर खुसी मनाइरहेका छन् ।
भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले चुनावी हार स्वीकार गरेका छन् र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिएका छन् । भाजपा नेतृ सुष्मा स्वराज तथा नेपालका प्रधानमन्त्रि के.पि. शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अग्रीम बधाई दिएका छन् ।
May 19, 2019 by admin Posted in Uncategorized
एजेन्सी-झापाको काकडभिट्टाबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको यात्रुबस धादिङमा आज बिहान दुर्घटना हुँदा आठको मृत्यु भएको छ भने पच्चिस जना सख्त घाइते भएको एजेन्सीले जनाएको छ । ।
May 13, 2019 by admin Posted in विश्व	Tagged Burkina Faso church attack
अफ्रिकी देश बुर्किना फासोको डब्लो शहरस्थित चर्चमा गोली हानाहान हुदा त्यहॉका पादरी सहित ६ जानाको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो ५ हफ्तामा भएको यो तेस्रो बन्दूक हमला हो। यसअघि डोरी कस्बे, केथोलिक चर्च र सिल्गाद्जी शहरको प्रोटेस्टेंन्ट चर्चामा समेत हमला भईसकेको छ।
करोडौं ठगेर फरार गाइका सरस्वती,उनको पुर्व पति मिडियामा
May 11, 2019 by admin Posted in समाचार
काठमाडौ २८ बैशाख । गायिका सरस्वती लामा (भुजेल) र उनका श्रीमान पिटर खालिङ (राई) को यतिबेला निकै चर्चा चलेको छ । गायिका सरस्वती लामा भुजेलले श्रीमान विदेश भएको अवस्थामा पिटरखालिङसंग विवाह गरेर गएपछि यतिबेला सरस्वतीको झनै चर्चा चलेको छ । सरस्वतीको चर्चा अरु केही नभएर आफनै श्रीमान डिबी लामाको एक करोड ६ लाख बराबरको धनमाल सहित पिटर खालिङ (राई) संग विवाह गरेपछि उनको चर्चा चलेको हो ।
पछिल्लो पछि विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा गायिका सरस्वती लामा र पिटर खालिङ (राई) को बारेमा समाचार छाइ रहेका छन । सरस्वती लामाका श्रीमान डिबी लामाले विदेशबाट नेपाल आएर सरस्वती विरुद्ध प्रहरीमा ठगीको उजुरी हालेपछि घटना बाहिर आएको हो । डिबी लामाले उजुरी हालेसंगै सरस्वतीका श्रीमान पिटर खालिङ (राई) र सरस्वतीलाई प्रहरीमा उपस्थित गराइएको थियो । बौद्ध प्रहरीमा उपस्थित भएका सरस्वती र पिटरले प्रहरीको रोहबरमा डिबी लामाको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी सहमती गराएको प्रहरीले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि विदेशमा बसेर कमाएको पैसा र धनमाल सहित पिटरसंग विवाह गरेपछि विदेशमा रहेका डिबीले पिटरलाई पटक पटक आफनोृ श्रीमतीको पछि नलाग्न आग्रह गरेका थिए । त्यसबेला पिटरले ‘आफु डन भएको र नेपाल आइन २ र ४ जना भरौटे गुण्डा फटाए पनि डराउदिन पिटर खालिङ हो म ’ भन्दै डिबीलाई तथानाम गालि गरेका थिए । यसरी समाजिक सञ्चालमा गालि गलौज गरेपछि साइबर क्राइम लगाउने तयारी भएपछि पिटर डिविसंग झुकेर प्रहरीको रोहबरमा डिविको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गरी कागज गरेर महानगरीय प्रहरी बृत्त बौद्धबाट छुटेका हुन । यसरी छुटेका पिटरले यतिबेला आफनो सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन ‘पिटर खालिङ्ग काहा गयो ? को सङ्ग बोल्यो ? के खायो ? कस्तो लायो ? मोराले एक दुई जना तोरि लाउरे पत्रकार लाई त जागिर नै दिएका रैछ नि लु बधाई छ ती पत्रुकार लाई जागिर पाएको मा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेका छन । अर्काकी श्रीमती र सम्पत्ति ताकेर गायिका लामालाई विवाह गरेका पिटर आफु सहि र उनले गरेको गल्ती समाचार बनाउदा पत्रकारलाई पालेको आरोप लगाउनु पिटरको आपैmमा लज्जास्पद कुरा हो । चौकीमा माफ माग्दै कागज गरेर छुटेका पिटर आफु दोषी नभएको भन्दै विभिन्न स्टाटसहरु हालेका छन । यता सरस्वतीले भने ‘हजार आरोप लगाइ करोड कमाउला भन्ने अब सत्य कहिल्यै लुक्दैन भन्दै स्टाटस हालेकी छन । त्यति मात्र होइन सरस्वतीले डिवि लामा विरुद्ध मुद्धा समेत हालेकी छन ।
डिबी लामाबाट अंश र सम्पत्तिको माग गर्दै डिभोर्स मागेकी छन । डिबीले बर्षौदेखि विदेशमा बसेर कमाएको सम्पत्ति सहित लत्ता कपडा देखि घरायसी समान धनमाल सहित कुम्लाएर पिटरसंग विवाह गरेर गएकी सरस्वतीले उल्टै डिबी लामासंग डिभोर्स संगै अंशको दावी गरुेकी हुन । डिबी लामाले बौद्ध प्रहरीमा उजुरी हालेपछि रनथनिदै भक्तपुर जिल्ला अदालतमा पुगेर सरस्वतीले डिबीबाट अंश दिलाई डिभोर्स गरी पाउ भनि मुद्धा दर्ता गरेकी छन ।
डिबि लामा लामो समयदेखि बैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा युएइ बसेका थिए । नेपालमा रहदा ब्यापार व्यवसायबाट राम्रै आम्दानी गर्दै आएका डिबीलाई सरस्वतीनै विदेश जान कर गरेको डिबी बताउछन । नेपालमा नै आम्दानी गरिरहेका डिबीलाई विदेश जाउ भनेपछि श्रीमतीको सल्लाह अनुसार डिबी विदेश गएका थिए । विदेशमा डिबीको राम्रै कमाइ थियो । आफुले कमाएको सबै पैसा गायिका सरस्वतीलाई पठाउने गरेका थिए । तर एकाएक सरस्वतीले बर्षौ विदेशमा बसेर कमाएको सम्पत्ति धनमाल सहित पिटरसंग विवाह गरेपछि यतिबेला डिबीसंग नत आफुले विवाह गरेर भित्राएकी श्रीमती सरस्वती नै छन नत बर्षौ देखि विदेशमा बसेर कमाएको करौडौ रुपैया र धनमाल नै साथमा छ । उल्टै धनमाल कुम्ल्याएर हिडेको सरस्वतीले डिबीसंग अंश दावी गरेकी छन ।
सरस्वतीको पहिले देखिकै योजना थियो
सरस्वती लामा गीत संगीतमा लाग्दै गर्दा खेरी उनका श्रीमान डिबीको राम्रै साथ सपोर्ट थियो । आफनी श्रीमतीलाई राम्रो गायिका बनाएर चिनाउने डिबीको चाहना थियो । सुरुमा यी दुइको जोडी साच्ची नै राम्रो थियो । सरस्वती पनि आफनो श्रीमान भगवान जस्तै भएको भन्दै हिडेकी पनि हुन । यी दुइ जोडीमा सन्तानको चाहना नभएको पनि होइन । सन्तानको लागि धेरै खर्च पनि गरेका थिए । तर सरस्वतीबाट सन्तान नहुने भएपनि डिबीले सरस्वतीलाई छाडेर अर्को विहे गर्ने सोच बनाएनन ।
जब सरस्वतीले पहिलो एल्वम उत्तरपूर्व गीत सार्वजनिक गरिन त्यसपछि केही मिडिया कर्मीको साथ र सपोर्टले उनी चर्चा कमाउदै गइन । जुनबेला श्रीमान डिबी विदेश जाने आउने गरिरहेका थिए । त्यसपछि लगत्तै सरस्वतीले दोश्रो एल्वमका रुपमा उर्वशी विमोचन गरिन । उक्त एल्वम विमोचन गर्न श्रीमान नेपालमा आएका थिए । उर्वशी विमोचन पछि केही समयपछि सरस्वतीले विभिन्न मिडियाहरुमा स्थान पाइन । उनको चर्चा बढदै गयो । त्यस पछि सरस्वतीले एउटा रक स्टाइलमा तीज गीत गाइन । त्यसपछि सुरु भयो सरस्वतीको खेल । गीत संगै डिवि लामासंग चिनजान भएका केही पत्रकार र केही ब्यक्तिहरुलाई डिबीबाट सम्पर्क विच्छेद गराउने उद्देश्यले डिबीको फेसबुकमा सबैलाई ब्लक गरेकी रहिछन । डिबी र सरस्वतीसंग नजिक भएका ब्यक्तिहरु डिबीको फेसबुकमा एकाएक ब्लक भए यो कुरा डिबी पत्तै भएन ।
विदेशमा पुगेका डिबीले जब विश्वास गरिएका र सरस्वतीका नजिक रहेका र सरस्वतीसंग ठाकठुक परेका ब्यक्तिहरु एकाएक आफनो एकाउण्टमा ब्लक भएपछि डिबी अन्यौलमा परे ।
आफनै एकाण्टबाट ब्लक भएको थाहा नपाएका डिबीले आफुलाई ब्लक गरेर आफुमाथि ठुलै गेम खेलेको संका उत्पन्न भयो । सरस्वतीले विदेशमा रहेका डिबीलाई उल्टै ‘म विहे गरेर अर्कैसंग गए मेरो पछि नलाग मेरो परिवारलाई ल्याङ नगर’ भन्दै म्यासेज गरेकी थिइन । पिटरसंग मिले उनी फिल्म बनाउन लागेकी थिइन ।पिटरसंगै मिलेर फिल्म बनाउनेृ र पिटरसंगै जीवन विताउने सरस्वतीले निर्णय गरिन । पिटर पनि आफनो श्रीमतीलाई डिभोर्स गरेर सरस्वतीसंग सम्बन्ध अगाडि बढाए । दुवैले फेसबुकमा विवाह नै गरेर बसेको झल्कने बुढाबुढीको नाता देखिने स्टाटसमा उल्लेख गरे । यता आफनै श्रीमतीले परपुरुषलाई श्रीमान बनाएर फेसबुकमा नै स्टाटसहरु हल्न थालेपछि डिबी नेपाल आउदा घरमा भएको समान सहित सरस्वती हिडिसकेकी थिइन । डिबीले नेपाल आएपछि आफुलाई फेसबुकमा ब्लक गर्ने ब्यक्तिहरुसंग भेटन थालेपछि बल्ल थाहा भयो ति ब्यक्तिहरुले फेसबुकमा ब्लक नगरेको आफनै एकाउण्ट बाट ब्लक गरिएको रहेछ । तर डिबीले आफुले ती ब्यक्तिहरुलाई ब्लक नगरेको कारण कसरी ब्लक भए भन्ने कुरामा जब डिबि नेपाल आए त्यसबेला डिबीले मोवाइलाई आफनो एकाउण्ट साइन आउट नगरी राख्थे डिबी निदाएको मौकामा सरस्वतीले डिबीको एकाउण्टबाट १० जनालाई ब्लक गरिन । जुन ब्यक्तिहरु सरस्वतीको बारेमा डिबीसंग कुरा गर्न सक्थे । यसरी योजनाबद्ध तरिकाले सरस्वतीले २ बर्ष पहिले देखि नै योजना बनाएको अनुसन्धानमा देखिन्छ ।
May 3, 2019 by admin Posted in राजनीति
May 2, 2019 by admin Posted in खेलकुद
आज बाट जापानमा नयाँ राजा नारुहितो सत्तासिन
May 1, 2019 by admin Posted in विश्व
जापान, १८ वैशाख – जापानको राजगद्दीमा आजबाट नयाँ राजा नारुहितो आसिन भएका छन् । यसअघिका राजा अकिहितोले स्वच्छाले गद्दी त्यागेपछि उनका छोरा नारुहितोले नयाँ राजाका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् ।
आफ्नो बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण ८५ वर्षीय अकिहितोले मंगलबार राजगद्दी त्याग गरेका हुन् । उनी जापानको इतिहासमा दुई सय वर्षयता जीवितै रहँदा राजगद्दी त्याग गर्ने पहिलो राजा बनेका छन् ।
अकिहितोका ५९ वर्षीय छोरा नारुहितोले जापानको १२६औँ राजाका रूपमा बुधबार राजगद्दी सम्हालेका हुन् । योसँगै जापानमा नयाँ युग सुरु भएको मानिएको छ । यो युगलाई रेइवा युगको नाम दिइएको छ ।
श्रीलंकामा राष्ट्रिय शोक, मृतकको संख्या ३१० पुग्यो, आक्रमणकारी अझै अज्ञात
April 23, 2019 by admin Posted in Uncategorized	Tagged Srilanka's Church Attack
१० वैशाख, काठमाडौं । श्रीलंकामा गत आइतबार चर्च र होटलहरुमा भएका श्रृंखलावद्ध बम विष्फोटमा मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढेर ३१० पुगेको छ । प्रहरीका अनुसार ५ सय जना घाइते छन् ।
श्रीलंकामा संकटकाल घोषणा गरिएको छ र आज राष्ट्रिय शोक मनाइँदैछ ।
2,981 Likes Like our page